एमालेले यसरी थाल्यो नेपालगन्जमा घरदैलो अभियान (फोटो कथा सहित ) – Sadarline
२८ कात्तिक, नेपालगन्ज : आगामी मंसिर २१ गते हुने आम निर्वाचनको प्रचार अभियान बाँकेमा तीब्र पारीएको छ । संयुक्त बाम गठबन्धनले नेपालगन्जमा घरदैलो अभियान शुरु गरेको छ । क्षेत्र नं. २ र प्रदेश सभा ‘ख’ मा पर्ने नेपालगन्ज बजारबाट वाम गठबन्धनले घरदैलो अभियान शुरु गरेको हो ।
क्षेत्र नं.२ का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार पशुपतिदयाल मिश्र र प्रदेशका उम्मेदवार विजयकुमार गुप्तासहितको टोलीले नेपालगन्ज–२, घरबारीटोलबाट अभियानको शुरुवात गरेका छन् । दुई उम्मेदवार, संयुक्त वामगठबन्धन बाँके क्षेत्र नं. २ र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताहरु घरदैलोमा सहभागी रहेका थिए ।
वडा नं.२ का घर, पसलहरुमा पुगेर उम्मेदवार मिश्र र गुप्ताले आफूलाई मत दिन अनुरोध गरेका थिए । संयुक्त वामगठबन्धनका उम्मेदवारहरु सूर्य र गोलाकार भित्रको हसिँया हथौडा चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा, व्यानर, पोष्टर, पम्प्लेट लिएर मतदाताको घरदैलोमा पुगेका थिए ।
पहिलो दिनको घरदैलोमा पुग्दा जनताले राम्रो सम्मान गरेको नेपालगञ्जका प्रदेश उम्मेदवार गुप्ताले बताउनुभयो । एकपटक आफूलाई चुनाव जिताउन अनुरोध गर्दै मतदाताकहाँ पुगेका गुप्ताले विधायक हुँदा पाउने पारिश्रमिक सामाजिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । संयुक्त वामगठबन्धन तथा एमाले र माओवादी केन्द्रसमर्थित चुनावी गीत बजाउदै ठूलो संख्याका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बजारमा निस्किदा चुनावी माहोल देखिएको थियो ।
नेपालगन्ज बजारमा अरु भन्दा एमालेले अगाडि घरदैलो थालेको छ । वडामा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजक बनाइसकेको वामगठबन्धनले एमाले र माओवादी केन्द्रका वडाका कमिटीहरुलाई एउटै बनाउदै चुनावी अभियानलाई अझ सशक्त बनाएका छन् । वडा नं. ४ मा मंगलबार संयुक्त कमिटी गठन गरेर ३० गतेको घरदैलोलाई बृहत बनाउने निर्णय गरेको छ । अरु वडाका कमिटीहरु पनि एउटै बनाउने क्रम तिब्रगतिमा अघि बढेको छ ।
सदरलाइनडटकम २८ कात्तिक, नेपालगन्ज : लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नेपालगन्जको वडा नम्बर ४ स्थित सल्यानीबाग क्षेत्रमा मंगलबार प्रचार अभियान सञ्चालन गरेको छ । सो गठबन्धनले चुनावी प्रचार प्रसार तथा कोण सभा समेत आयोजना गरेको जनाएको छ । कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका महामन्त्री एवम् नेपालगन्ज उपमहानगर मेयर धवलसम्शेर राणाले बाँके क्षेत्र नम्बर […]
२४ मंसिर २०७६, मंगलवार १८:३४